Warbixinta Chilcot oo la daabacay - BBC News Somali
Warbixinta Chilcot oo la daabacay
Image caption John Chilcot ayaa hogaaminayay baaritaanka oo qaatay toddobo sano
Toddobo sano baaritaan lagu samaynayay Britain iyo dagaalka Ciraaq ayaa warbixin soo baxaysa maanta lagu ogaanayaa wixii ka soo baxay, baaritaanka ayaa dhaleecayn doona hayadaha dowladda iyo dad dhowr ah.
John Chilcot oo hadlay ayaa sheegay in talaabada milatari lagu dagdagay.
UK ma aysan isku dayin si nabad ah inay Saddam Xuseen hubka uga dhigto si ay xal u hesho, intaysan weerar ku qaadin Ciraaq, ayuu sheegay godoomiyaha baaritaanka Britishka ee dagaalka Ciraaq.
Gudoomiya baaritaanka John Chilcot, ayaa sheegay inuu rajaynayo in warbaxinta ay suurto galin doonto in faragalin milatari oo noocan oo kale u wayn, inaysan suurtoobi doonin mustaqbalka iyadoon si fiican looga fiirsan oo aan la samayn go'aan siyaasadeed oo si fiican looga dooday.
Go'aanka 2003-dii uu gaaray ra'iisal-wasaare,Tony Blair, uu ugu diray askar British ah inay ka dagaalamaan Ciraaq, ka dib cod baarlamaaneed ayaa ah siyaasadii dibadda ee ugu qilaaf badnayn konton sano.